रातारात भाईरल भएकी यी युवती, जसको पछाडी मोडलिङ एजेन्सीहरुको लर्को — onlineakhabar.com
प्रकाशित : पौष १७, २०७४ | १७९ पटक हेरिएकोसमाचार
एजेन्सी । सामाजिक संजालमा तपाइँले अधिकांश राम्रा र सुन्दर तस्बीर देख्नु भएको होला । तर, पछिल्लो समयमा सामाजिक संजालमा एक युवतीको फोटो निकै भाइरल भएको छ । सुडानकी यी युवतीलाई आफू यतिधेरै चर्चित हुन्छु भन्ने सोचेकी समेत थिइनन् ।
१९ वर्षीया यी युवतीका पछाडि धेरै मोडलिङ एजेन्सी लागिपरेका छन् । यी मोडलिङ एजेन्सी यी युवतीलाई साइन गर्न चाहन्छन् । यो सबै दुई वटा फोटो इंस्टाग्राममा राखेका कारण भएको हो।
१९ वर्षीया अनोक याई नाम गरेकी यी युवती १९ वर्षकी भइन् । उनले इंस्टाग्राममा राखेका दुई वटा फोटो उनले अमेरिकाको वाशिंटनस्थित हावर्ड विश्वविद्यालयको होमकमिङ फेस्टिवलमा खिनाएकी थिइन् ।
त्यहाँ केही फोटोग्राफरले अनोक वाईलाई देखेर केही फोटो खिचेका थिए । पछि ती फोटोग्राफरले अनोकका फोटो सामाजिक संजाजलमा अपलोड गरे।
त्यसपछि उनी रातारत हिट भइन् । उनको फोटो एकै दिनमा ११ हजार मानिसले मन पराएका थिए । अनोक भन्छिन्, ‘म त्यो महोत्वसबाट फर्किएर आउँदा मेरो फोटो भाइरल भइसकेको थियो । मेरा जुन फोटो भाइरल भएका छन्, ती खासै राम्रा छैनन्।’
उनका अनुसार गत महिना मोडलिङ एजेन्सी नेकस्ट मोलडले उनलाई अनुबन्धित गरेको छ। सामाजिक संजाल एक यस्तो प्लेटफर्म हो जसको यदि कोही भाइरल भयो भने उ रातारात सुपरस्टार बन्छ ।
लौ हेर्नुहोस् विश्वको सबैभन्दा महँगो कफि हात्तीको दिसाबाट कसरी बन्छ ?(भिडियो सहित)
रहस्यमय पुल : जहाँबाट ६०० कुकुरले आत्महत्या गरिसके कारण ! यस्तो छ ? [फोटो र भिडियो सहित]